အင်တာနက်ပေါ်ရှိမြေပုံများအားဝင်ရောက်ဖို့ GPS စနစ် Tracker configure – တေလာ Lopes ツဘလော့
ယနေ့ခေတ်ဤမျှလောက်မလုံခြုံမှုနှင့်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေနှင့်အတူ, ကျနော်တို့ဆုံးရှုံးမှုရှိသည်မဟုတ်မှအရာအားလုံးကိုပြုပါ. တစ်ဦးခိုးယူကားတစ်စီးရှိခြင်းထက်ဒါပေမယ့်ပိုဆိုး, ဒါဟာဒီကားအတွက်ဒုက္ခတစ်မိသားစုရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဘုရားသခငျသညျအဘယ်မှာရှိသိတယ်. အဖြစ်များသည် Tracker သငျသညျဤဖြစ်ပျက်ကနေတားဆီးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါပေမယ့်ကအနည်းဆုံးသင်မော်တော်ယာဉ်၏အတိအကျတည်နေရာကိုသိရန်ရှာအကူအညီနဲ့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်.
သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီကြားဖြတ်ပဿဒ္ဓိကုန်ကျရှိပါတယ်. သငျသညျ R ကို $ ဘို့ကိုဝယ်အဆိုပါ Tracker 150,00 ပျမ်းမျှအားဖြင့်, ပြီးသား R ကို $ ပတ်လည် chip ကိုတယ်လီဖုန်းအစုံလိုက်သုံး packet ဒေတာများထုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း 10,00 လစဉ်, M2M စနစ်သုံးပြီး (စက်မှစက်). ပြီးတော့, ဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိသို့မဟုတ်မ? ကောင်းစွာ, လူတိုင်းရှိရာ callus ပုံနှိပျသိတယ်, အဘယ်အရာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခံရဖို့ထိုက်တန်သို့မဟုတ်မ. ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆိုသညျကားအဖြစ် “ရုံကျိုးတံခါးကိုအပြီးသော့ခတ်ချပြီးမသုံးပါ”. ငါကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ;)
တည်ရှိ Trackers ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် vehicular အသုံးပြုရန်သည်. ငါ၏အမှုကိစ္စများတွင်, ငါ TK103A ဝယ် (Coban), စိတ်ကူးအချို့အကျွမ်းတဝင်လမ်းကြောင်းစောင့်ကြည့်ဖို့ကားထဲတွင်ထားရန်ကြောင့်. ဒါပေမယ့်ပြtheနာကသင် GPS တစ်ခုဝယ်တဲ့အခါမှာ Tracker, ဘယ်သူမှ command များကိုပေးပို့ခြင်းနှင့်သြဒီနိတ် SMS ကိုလက်ခံရရှိခံရဖို့လိုလား (စာသားမ). အဲဒီငြီးငွေ့စရာင်! သငျသညျကိုမွငျခငျြ “အရာ” အဘယ်သူမျှမကမြေပုံ, Real-time. ဒါကြောင့်အပေါ်လာ!
1) GPS လမ်းကြောင်း (လိမ္မော်သီး – အခမဲ့).
2) TrackerHome (“ဆာဗာက 1”: အိုင်ပီ 202.104.150.75 – အခမဲ့).
3) CorvusGPS (ငွေပေးချေမှု – $0.02/နေ့)
နှစ်ယောက်ရှိတယ် ETAPAS အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလိမ့်မည်ဟု configuration ကို options များ:
1) Tracker စီစဉ်မှု (အဘယ်သူမျှမကိစ္စ, အဆိုပါ TK103)
2) မြေပုံများတပ်ဆင်ရန်ကိုသြဒီနိတ်ဖမ်းယူသောဆိုက် / ဝက်ဘ်စနစ်ပေါ်ရှိဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ.
ငါ GPS-Trace သုံးပြီး configuration ကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်, TrackerHome နှင့်သို့မဟုတ် CorvusGPS, ဒါဟာရှေးခယျြဖို့သငျသညျအထိဖြစ်ပါသည်, သို့သော် M2M Chip နှင့် GPS-Trace အသုံးပြုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အထူးတိုက်တွန်းပါသည်.
သငျသညျစတင်ခင်မှာ, သင့်ရဲ့ Tracker ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား (TK103A device ကို) ရှိပြီးသားအပြည့်အဝစစ်ဆင်ရေးအတွင်း, အခြားစကား, ဆဲလ်များ၏စီမံခန့်ခွဲသူများက SMS ကိုကနေတဆင့်လှေတျတျောမူလက်ခံပညတ်တော်တို့ကို, သငျသညျ = ဘာတွေလဲ)
သင်တို့သည်ဤမျှပြုမိကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ဒီမှာကြည့်ယူ ပေါ်တူဂီအတွက် TK103 လက်စွဲစာအုပ်. အခြေခံအားဖြင့်တော့မင်းရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးဖို့လိုတယ် Tracker မက်ဆေ့ခ်ျများလက်ခံခြင်းနှင့်ပို့ခြင်း.
အရာအားလုံးအလုပ်လုပ်, သင့်ရဲ့ချစ်ပ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျအစီအစဉ်ရှိကြောင်းသေချာအောင် (စာတို) နှင့်အချက်အလက် (အင်တာနက်ကို) enabled. သင်သည်သင်၏ chip ကိုအားမရသဖြင့်ဒီစမ်းသပ်နိုင်သည် (ပြုပါ Tracker) တစ်ဦးကလာပ်စည်း, အထဲတွင်ချပြီးမတိုင်မီစမ်းသပ်ပေးပို့ခြင်းကို SMS နဲ့အညွှန်းအောင် Tracker settings ကိုစတင်ရန်.
သင်ကားထဲတွင်သင့်ရဲ့ Tracker install လုပ်မယ့်နည်းပညာရှင်ကိုမေးသောအခါ,, က tracker အပေါ်ကြွလာသော GPS စနစ်အင်တင်နာနှင့် GSM အင်တင်နာတင်ထားတော်မူမည်သေချာကြောင်းပါစေ, ကားအတွင်းပိုင်းတစ်ဦးသင့်လျော်သောအရပ်ဌာန၌.
ဒါဟာဒါအစိုင်အခဲအစိတ်အပိုင်းများ / သတ္တုကားတစ်စီး်ရောက်စွက်ဖက်အကြောင်းမရှိမနှင့်ဂြိုလ်တုအချက်ပြမှုလျှော့ချတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ် (ဂျီပီအက်စ်) နှင့်တယ်လီဖုန်း (ဂျီအက်စ်အမ်). မဟုတ်ရင်, အဆိုပါ tracker တွင်ရယူလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိစစ်အပြစ်အနာလိမ့်မည် (ဂျီပီအက်စ်) နှင့်ထုတ်လွှင့် (ဂျီအက်စ်အမ်) ယင်းပထဝီစနစ်တကျဒေတာကိုသြဒိနိတ်နှင့်မြေပုံပေါ်တွင်ဖော်ပြရန်ချို့ယွင်းပါလိမ့်မည် (စိတ်မချရ).
အဘယ်သူမျှမ YouTube ကို အခြို့သောဗီဒီယိုများရှိရာအင်တင်နာကိုနေရာချခြင်းမှအကောင်းဆုံးရှင်းပြထားသည်.
စင် 1 – Tracker စီစဉ်မှု
– ဤချိန်ညှိသည့် Tracker TK103A ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်တခြားအလားတူမော်ဒယ်များမှာအလုပ်လုပ်နိုင်ပေမယ့်.
– သရုပ်ပြအမိန့်မှ, ကျနော်တို့ကြောင်းကို default password ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် 123456, သင်အလိုရှိပါလျှင်ဒါပေမယ့်သင်ကပြောင်းလဲနိုင်သည် (အဆိုပါဖျောပွလက်စွဲကိုကြည့်ပါ).
– သငျသညျဝင်သောအခါ, တစ်ဦးချင်းစီက command မှာပြထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျအတိုင်းစာလုံး / အသေးကိုသုံးပါ.
– သင့်ကားတဲ့နေရာဖွင့်လှစ်အတွက်ထား (မဟုတ်အတွင်း၌ကားဂိုဒေါင်)
ငါဆင့်ကဲအားလုံး command များကိုစာရင်းပြုစုမည်, ယင်းပြီးနောက်, သူတို့ကိုရှင်းပြ. ဒီတော့ဒီမှာ Chip Vivo M2M နဲ့ GPS-Trace Maps ကိုသုံးပြီး tracker TK103 တစ်ဦးပြည့်စုံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ tracker ရဲ့ချစ်ပ်အရေအတွက်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှအောက်ပါ SMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ:
admin123456 5561983030102 //သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပညတ်တော်တို့ကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြု. ပြန်: "admin ok!"
password123456 112233 //ပြောင်းလဲမှု password ကို 123456 အတွက် 112233. စကားဝှက်ကိုရွေးချယ်ပါ6ဂဏန်း
begin112233 //ပြန်: "begin ok!"
GPRS112233 //ပြန်: "GPRS OK!"
အသကျရှငျသကျရှငျစ up112233 //ပြန်: "user,စကားဝှက်ကို ok!"
admin123456 5561983030102 //သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပညတ်တော်တို့ကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြု. ပြန်: "admin ok!" password123456 112233 //ပြောင်းလဲမှု password ကို 123456 အတွက် 112233. စကားဝှက်ကိုရွေးချယ်ပါ6dígitos begin112233 //Retorna: "begin ok!" GPRS112233 // Returns: "GPRS OK!" adminip112233 193.193.165.166 20558 APN112233 smart.m2m.vivo.com.br up112233 vivo vivo //Retorna: "user,စကားဝှက်ကို ok!" fix030့*** n112233
က, အသုံးပြုတဲ့ဂျီပီအက်စ်-Trace Configuration ကိုအထက် + တိုက်ရိုက်လွှ M2M. အောက်တွင်, ငါ settings ကိုအချို့ကအခြားပေါင်းစပ်အဆင်သင့်ချန်ထားမည်, သင်သည်အခြားမြေပုံဆာဗာနှင့်အခြားလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် (ချစ်ပ်). ကျနော်တို့ခြောက်ယောက်ဥပမာများ, တစ်ဦးတည်းသာရှေးခယျြ! အဆိုပါ GPS စနစ်-Trace သုံးစွဲဖို့သတ်မှတ်မည်, TrackerHome သို့မဟုတ် CorvusGPS နှင့်, သင့်မိုဘိုင်းကနေ, အဆိုပါချစ်ပ်အရေအတွက်ကိုကနေခြေရာခံရန်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှအောက်ပါ SMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့:
1)GPS လမ်းကြောင်း + တိုက်ရိုက်လွှ M2M
4)GPS လမ်းကြောင်း + တိ
2)TrackerHome + တိုက်ရိုက်လွှ M2M
5)TrackerHome + တိ
3) CorvusGPS + တိုက်ရိုက်လွှ M2M
6)CorvusGPS + တိ
begin123456 ဒါဟာစက်ရုံ default အဖို့အားလုံးကို setting ကိုတစ်ဦးမှပြန်လည်စတင်စေသည်
GPRS123456 အဆိုပါ GPRS mode ကိုများအတွက် set Tracker (ကို default ကို SMS ဖြစ်ပါသည်). ဤသည်အစားကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကအင်တာနက်ပေါ်ရှိ server ကိုစလှေတျခံရဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (စာတို)
APN123456 tim.br သင့်ရဲ့ GPRS အဘို့အစုံက APN. Acess Point Name (APN) ဒါဟာသင့်ရဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှဆက်သွယ်ခွင့်ပြု. ဒီအစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုသင်အသုံးပြုနေသောသောချစ်ပ်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်. သင်တို့ရှိသမျှသည် APN ၏ဤစာရင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်: https://www.followmee.com/APNList.aspx
adminip123456 202.104.150.75 9000 ယင်း IP ကိုသတ်မှတ်ရန်နှင့် provider ကတံခါးကိုမြေပုံ. သင်ကဂျီပီအက်စ်-Trace သုံးစွဲဖို့ရှေးခယျြသငျ့သညျ, TrackerHome သို့မဟုတ် CorvusGPS, တစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏တိကျတဲ့အိုင်ပီ / port ကိုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
up123456 အသင်းအဖွဲ့ အဆိုပါ username နှင့် password ကို GPRS ကွန်နက်ရှင် APN ကို Set
fix030့*** n123456 အဆိုပါ Tracker ကိုသြဒီနိတ်တင်ပြပါလိမ့်မည်သောအချိန်ကြားကာလကို configure. ဤကိစ္စတွင်အတွက်, အသီးအသီး 30 စက္ကန့်.
စင်2– အဆိုပါ Maps ကိုဆိုက်ချိန်ညှိခြင်း
သင့်ရဲ့ tracker ၏ IMEI ရဖို့ (TK103), အဆိုပါချစ်ပ်အရေအတွက်ကိုကနေခြေရာခံရန်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှအောက်ပါ SMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့:
imei123456 //123456 ဒါဟာက default password ကိုဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်သင့်စကားဝှက်နဲ့အစားထိုးဖို့. ပြန်: အဆိုပါရဲ့ IMEI number
သငျသညျ GPS စနစ်-Trace သုံးစွဲဖို့ရှေးခယျြခဲ့ပါလျှင်, အောက်ပါပြုပါ:
1. ဝင်ရောက်ခွင့် http://gps-trace.com/, နှင့်ရှေးခယျြ “ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း” နှင့် “အခမဲ့အကောင့်တစ်ခု Create” အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်.
2. log in ဝင်ရန် http://orange.gps-trace.com/ setup ကိုစတင်.
3. ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “Activate” နှင့်နယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်ပါ:
– အမည်: သင့်ကားများ၏ပန်းကန်သို့မဟုတ်မော်ဒယ်,
– device အမျိုးအစား: GPS103-B က,
– ID ကိုသာ: သင့်ရဲ့ IMEI နံပါတ်ကို,
– ဖုန်းနံပါတ်: အဆိုပါ tracker အတွက် chip ကိုအရေအတွက်ကို (ထွ: +556198761234),
– device ကိုဝင်ရောက်ဖို့ Password ကို: tracker password ကို
4. ယခင်မျက်နှာပြင်တဲ့အခါမှာကယ်တင်နှင့်ပိတ်ဖို့, သင့်ရဲ့ Tracker လက်ျာဘက်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. အရာအားလုံးထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ အကယ်., icon တစ်ခုအစိမ်းရောင်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်, မြေပုံပေါ်တွင်သင်၏ Tracker ရဲ့အနေအထားကိုပြသ.
ပွောဆို: ငါ၏အမှု၌, အိုင်ကွန်သာတက်ကြွစွာနှင့်သာမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်မြေပုံပေါ်တွင်ပေါ်ထွန်းသောခြေရာခံ, ငါကားနှင့်အတူလမ်းလျှောက်အပြီး.
သငျသညျနောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါက, ဗီဒီယိုကြည့်ရှု Clebson Lima “မည်သို့မှတ်ပုံတင်, tracker TK103 303 NO SITE ကို DA လိမ္မော်ရောင်”:
အဲဒီမှာ, သေး, မှာရရှိနိုင်ပါကမိုဘိုင်း device များအတွက်လျှောက်လွှာ Google Play စ အီး IOS ကို.
သင် TrackerHome သုံးစွဲဖို့ရှေးခယျြခဲ့ပါလျှင်, အောက်ပါပြုပါ:
1. ဝင်ရောက်ခွင့် http://www.gpstrackerxy.com/, နှင့် Server1 ရွေးပြီးကလစ်နှိပ်ပါ “စာရင်း” အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန် (အဆိုပါရဲ့ IMEI က command နှင့်သင်၏ Tracker ဖို့ကို SMS ပေးပို့ခြင်း Get “imei123456”).
2. အတွက် Log နှင့် menu ကို click နှိပ်ပြီး “System ကို Setting> Terminal နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု” သင့်ရဲ့ Tracker ထည့်သွင်းဖို့.
3. ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “ပေါင်း” နှင့်နယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်ပါ:
– IMEI အဘယ်သူမျှမ: သင့်ရဲ့ IMEI နံပါတ်ကို,
– အမည်: သင့်ကားများ၏ပန်းကန်သို့မဟုတ်မော်ဒယ်, အီး
– ပုံစံ: Track option ကိုရှေးခယျြပါ
4. ယခင်မျက်နှာပြင်တဲ့အခါမှာကယ်တင်နှင့်ပိတ်ဖို့, သင့်ရဲ့ Tracker လက်ဝဲဘက်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. အရာအားလုံးထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ အကယ်., တဦးတည်းဘောလုံးကိုအိုင်ကွန်အစိမ်းရောင်လှည့်, မြေပုံပေါ်တွင်သင်၏ Tracker ရဲ့အနေအထားကိုပြသ.
သင် CorvusGPS သုံးစွဲဖို့ရှေးခယျြခဲ့ပါလျှင်, အောက်ပါပြုပါ:
1. ဝင်ရောက်ခွင့် https://corvusgps.com/ နှင့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီး (တစ်ဦးအခမဲ့အကောင့် Create).
2. အတွက် Log နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “ဂျီပီအက်စ် tracker”.
3. သင့်ရဲ့ Tracker Add (tracker) ယင်းကိုနှိပ်ခြင်း “အသစ်ကဂျီပီအက်စ် Tracker Add”:
– device ကို Select လုပ်ပါ, ငါ၏အမှု၌, အဆိုပါ TK103
– device ကိုအမည်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ, အဆိုပါလုပ်သို့မဟုတ်လိုင်စင်ပန်းကန်နိုင်ပါတယ်
– သင့်ရဲ့ Tracker ၏အစီရင်ခံစာရဲ့ IMEI number
(အဆိုပါရဲ့ IMEI က command နှင့်သင်၏ Tracker ဖို့ကို SMS ပေးပို့ခြင်း Get “imei123456”)
4. သင့်ရဲ့ Tracker ထည့်သွင်းပြီးနောက်, ယင်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “မြေပုံပေါ်တွင်ပြရန်” နှင့်အဆင်သင့်, ဒါဟာမြေပုံနှင့်သင့် Tracker ရဲ့အနေအထားကိုပြသ (ကား).
၏တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက် CorvusGPS သင်ရှာတွေ့ အသုံးပြုသူရဲ့လက်စွဲစာအုပ် TK102 နှင့် TK103 GPS စနစ် Tracker များအတွက်.
နှစ်ဦးစလုံးဆိုဒ်များတွင်လည်းအခြားအစိတ်ဝင်စားဖို့ setting များကိုပူဇော်, မြေပုံများအားအမျိုးမျိုးအပါအဝင်.
အရေးကြီး: ဒါဟာအကြံပြုသည်, configuring ပြီးနောက်, တစ်လိပ်5တစ်ဦး 15 ယာဉ်နှင့်အတူမိနစ်သာမြေပုံဆာဗာများအားဖြင့် tracker ၏မှတ်ပုံတင်လွယ်ကူချောမွေ့ရန် (ဖမ်းယူ / data တွေကိုထုတ်လွှင့်).
နားထောင်ခြင်း / စောငျ့ရှောကျ
သင်ကလမ်းပေါ် Tracker ထွက်ခွာနိုင် “စောငျ့ရှောကျ” ပတ်ပတ်လည်အရာအားလုံးကိုနားထောငျခ.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော SMS ကို command ကို Send နှင့်တုန့်ပြန်ဘို့စောင့်ဆိုင်း “ok ု့ကပ်ရေး”. ထိုနောက်မှ, အဆိုပါ tracker ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှဖုန်းခေါ်စေခြင်းနှင့်သင်ပတ်ဝန်းကျင်နားထောင်နိုင်သည်.
ထိုအသေး, သင် web TrackerHome သို့မဟုတ် CorvusGPS အဖြစ် Real-time system ကိုအသုံးပြုနေလျှင်, လုပ်:
ဒီ feature စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအရပျထဲကကားတစ်စီးလျှင်အကြောင်းကြားထားပါသည်များအတွက် :)
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော SMS ကို command ကို Send နှင့်တုန့်ပြန်ဘို့စောင့်ဆိုင်း “Ok ရွှေ့”. မည်သည့်လှုပ်ရှားမှု အကယ်., သင်တစ်ဦးကို SMS ကိုလက်ခံရရှိ “လှုပ်ရှား” ကိုသြဒီနိတ်နှင့်အတူ.
M2M chip ကိုဖုန်းက – စက်မှစက်
သငျသညျ packet ကိုဒေတာဖြင့်ဘုံ chip ကိုဆဲလ်ကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်အကြံပေးကြဘူး, ဒါဟာသိပ်ကုန်ကျ, လစဉ်အစီအစဉ်အဖြစ် prepaid နှစ်ဦးစလုံး. တိ na, ဥပမာအား, ပျမ်းမျှအား $ အပေါ်ကုန်ကျမည်တဲ့ chip ကိုစောင့်ရှောက် 35,00.
သင်သည်သင်၏ tracker အတွက်စျေးပေါ chip ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုလျှင်, M2M ဒါဟာခြောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်. ဒီဂျအတွက် (M2M) သငျသညျပမျြးမြှသာ $ အပေါ်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ် 10,00. အဆိုပါ M2M များသောအားဖြင့် SMS ကိုအထုပ်အတူပါလာပါဘူးအမျှ (သာဒေတာ), သငျသညျကို SMS ရှိပါတယ်တဲ့ chip ကိုအတူကနဦး crawler setting များကိုဖြစ်စေကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက်ရုံဖလှယ်. ငါစုံစမ်းစုံလင်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့.
အခမဲ့စျေးကွက်ထဲမှာသင်ရှာတွေ့ Tracker ရန် chip Vivo Unlimited M2M (လစဉ်အစီအစဉ်) တစ် R ကို $ 10,00.
စုစုပေါင်း access: 197861
5 ဇွန်လ 2016 တေလာ Lopes	APN, GPRS, ဂျီပီအက်စ်, tracker, tk103, tk103a, tracker
38 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း “အင်တာနက်ပေါ်ရှိမြေပုံများအားဝင်ရောက်ဖို့ GPS စနစ် Tracker configure”
ဒံယလေသ Moreira Gomes ကပြောပါတယ်:
ငါသည်ငါ့ TK103 စီမံခန့်ခွဲရန် GPS စနစ် tracker V.2.0.0.2 ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုချင်ပါတယ်.
ငါ၏အချိတ်ဆက်မှု Ip Send, တစ်ဦး porta redireciono 9000, ညာဘက်အရာခပ်သိမ်း.
သင် tracker တွင်ထည့်သွင်းတဲ့အခါသို့သော်အောက်ပါစာတမ်းပေါ်လာပါ “IMEI မှားနေသော”.
18 အောက်တိုဘာလ 2016 သို့ 15:46
Reinaldo Martins ကပြောပါတယ်:
ငါ Tracker GPS စနစ်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့အကူအညီကိုကြိုက်တယ်ဒါငါအမှနျရေးသားနေပါတယ်, ငါအမှားလုပ်နှငျ့သငျဆုံးမဩဝါဒပေးအဖြစ်ပလက်ဖောင်းပေါ်ခဲ့ကွောငျးရဲ့ IMEI ကိုဖျက်ပြီး, ယခုမူကားငါပလက်ဖောင်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနဲ့ဒီအကောင့်ကိုငါ server ကိုဖျက်ပစ်ရန်ရှိသည်ရှိကွောငျးပြောပါတယ်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2 နိုဝင်ဘာလ 2016 သို့ 13:00
ငါဘယ်လိုပိုပြီးမသုံးပါဘူးတဲ့ drive ကိုဖျက်ပစ်ပါဘူး ?
19 ဒီဇင်ဘာလ 2016 သို့ 9:14
ပြသခဲ့သည်အဖြစ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ site ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်ကားတစ်စီးမြေပုံပေါ်တွင်မဖြစ်သာအပြာ၌တည်ရှိ၏…ဘယ်လိုပြု? ဤသည်အတင်းအဓမ္မထားပါတယ်
15 ဇူလိုင်လ 2017 သို့ 14:24
တကယ်ပဲဒီအဘယ်သူမျှမကရှင်းပြခဲ့သည်ကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်မသိရပါဘူး, ဒီ site သိနေသူများကဖန်တီးသောသူဖြစ်ကောင်းသာတရုတ်.
ငါတူပြဿနာရှိခဲ့, အချို့ဗီဒီယို GPS စနစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုဆုံးမဩဝါဒပေးပေမယ့်လက်တွေ့တွင်အဘယ်အရာကိုမျှဖြစ်ပျက်ခြေရာခံ site ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးနားလည်ပေးသည်, အဖြစ်တစ်ဦးအကူအညီနဲ့သင်ခန်းစာပင်ဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့မဆိုအရေးယူစွပ်စွဲပါဘူးရှိတယ်အနည်းငယ်informaçãosရှိခြင်းနှင့်မGPS.É.
4 သြဂုတ်လ 2017 သို့ 22:33
Roberto Martinez ကပြောပါတယ်:
ငါ IMEI နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်, ငါကလကျခံပွီးမှားကပြောပါတယ်များနှင့်ပြီးသားနှင့်အတူ cale ပါဘူး3IMEI ကိုပိုမိုနှင့်မဆွဲ, အဘယ်သို့ငါပြဿနာရှာရန်ကူညီနိုင်ခြင်း.
28 သြဂုတ်လ 2017 သို့ 16:52
အန်တိုနီယို Gama ကပြောပါတယ်:
အဆိုပါမှန်ကန်သောရဲ့ IMEI များအတွက် tracker imei123456 ပြီးတော့သာစံချိန်ညာဘက်တစ်ဦး Message ပေးပို့
28 စက်တင်ဘာလ 2017 သို့ 0:21
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောညွှန်ကြားချက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြပါပြီ. ငါ GPRS ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိတယ် well.However အဆိုပါ sms ကိုပညတ်တော်တို့ကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြ. web / app ကိုတွင်ဈကားကိုအော့ဖ်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်တွေ့မြင်. အခြေအနေကိုစစ်ဆေးနေပေါ်မှာ GPRS အပေါ်ကပြောပါတယ်. တစ်စုံတစ်ဦးကအကူအညီတောင်း
19 စက်တင်ဘာလ 2017 သို့ 11:58
ဒါကြောင့်ကိုအလွန်ပျက်ကွက်သောကြောင့်, လျှောက်လွှာတွားမနေပါနဲ့. ထုတ်လုပ်သူရဲ့ website ကတဆင့်လုပ်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တာနဲ့ဆိုက်အသုံးမပြုမီမှန်ကန်စွာ settings ကိုပေးပို့ဖို့ရှိသည်.
28 စက်တင်ဘာလ 2017 သို့ 0:10
22 စက်တင်ဘာလ 2017 သို့ 11:16
ဗီယာ Carrillo ကပြောပါတယ်:
ငါတူပြဿနာရှိ, အရာအားလုံးကအရမ်းတက်ကြွသော်လည်းမြေပုံပေါ်တွင်ပြမဟုတ်, GPRS OFF, မက်ဆေ့ခ်ျကိုသက်ဝင်မှမှန်ကန်လျှင်ပင် (စောင်: GPRS OK ကို GPRS123456 နှင့်ဖြေကြား!).
ငါက fix နိုင်ပါတယ်ဘယ်လို?
ငါတူပြဿနာရှိ, အရာအားလုံးကောင်းစွာဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်မြေပုံထဲမှာမပြပါဘူး, GPRS OFF, ယင်း SMS ကိုမှန်သည်ကိုပင်ရသောအခါ (msg: GPRS123456, နှင့် GPRS OK ကိုဖြေကြား!)
29 စက်တင်ဘာလ 2017 သို့ 13:10
3 အောက်တိုဘာလ 2017 သို့ 0:14
Welvisley မွေးဖွားခြင်း ကပြောပါတယ်:
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ဖြစ်ဘူးသောအရပ်တွင်, ငါ့အချိန်အမှတ်အသား
13 နိုဝင်ဘာလ 2017 သို့ 12:47
မင်္ဂလာပါ , ငါ tracker tk ချိတ်ဆက်ဒုက္ခရှိခြင်းပါပဲ 103, ခြေလှမ်းတို့ကဖန်ဆင်းခြေလှမ်း , ကျွန်မဖုန်းကို check လုပ်ထား , ဒါပေမဲ့ဘာမျှမ site ပေါ်တွင်မချိတ်ဆက်ထားဘူး , ပြီးသား sms ကို blz အားဖြင့်ပညတ်တော်မူ၏, အားလုံးညာဘက် ta, ဒါဟာအံ့သြစရာအလုပ်ဖြစ်တယ်.
10 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018 သို့ 21:20
ငါသည်သင်တို့၏သတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြု. အရာအားလုံးသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ဿုံအလုပ်လုပ်.
15 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018 သို့ 9:54
Luciano Marquetti ကပြောပါတယ်:
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ငါသည်ငါ့ tracker တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေတာ, ဒါပေမယ့်ဒါဟာရဲ့ IMEI မမှန်ကန်ကြောင်းပြောပါတယ်, ငါတူအရေအတွက် box ထဲမှာလာ SMS နှင့် TBM နှင့်အတူအရေအတွက်ကိုယူခဲ့ပါတယ်။.
31 မတ်လ 2018 သို့ 16:11
ငါ tk303.desde ကျေးဇူးတင်အတူတူပါပဲငါအိုင်ပီ Tracker နေအိမ်သိလိုပါတယ်
11 ဧပြီလ 2018 သို့ 9:55
မိဒျန် Ribeiro ကပြောပါတယ်:
နံနက်ကောင်းသော, ငါ၏အ ratreador တုံ့ပြန်ခြင်းပေမယ့် sms ကိုဆယ်ကျော်သက်နှင့်အတူအဘယ်သူအားမျှ, ငါကို disable မလုပ်နိုင်ပါဘူးသို့မဟုတ် enable နှင့်ဘာမျှမပေမယ့်, ဘယ်လိုပြန်ဖြေမှာသူ့ကိုရကြဘူး, အဆိုပါ sms ကိုဘာမျှမရ Coz.
26 ဧပြီလ 2018 သို့ 9:42
sertamente အော်ပရေတာ tracker chip ကို sms ကိုပေးပို့ခြင်းပိတ်ဆို့
18 ဧပြီလ 2019 သို့ 15:08
Val မက်စ် ကပြောပါတယ်:
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းထားချင်ပါတယ် 30 လိမ္မော်ရောင်အတွက်တစ်ခုတည်းမှတ်ပုံတင်အတွက်ခြေရာခံ. အဘယ်သို့ငါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်? သင်သည်မည်သည့်အခကြေးငွေအကောင့်?
24 ဇူလိုင်လ 2018 သို့ 15:31
ငါ site ပေါ်တွင်ငါ၏အ IP ကို ​​tracker တွင်သတ်မှတ်ထားဖို့ကြိုးစားကြောင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောစကားဝှက်ကိုပြီးသားရှိကွောငျးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်. ဘယ်လိုကိုယ်ကပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားပါဘူး??
24 သြဂုတ်လ 2018 သို့ 16:20
နန်စီ VALLADARES ကပြောပါတယ်:
ငါ MY မူလစာမျက်နှာ tracker tracker ရှိသည်နှင့်စနစ်တကျဖြစ်လာခဲ့သည် functioning ကောင်းသောနေ့ GREEN ME ပေမယ်သာ UNIT အခြားသတင်းများမီးခိုးရောင် IN တစ်ဦးမဟုတ်တော့ Stay ကွောငျ့ပစ်ခတ်ဆှဲ ?
12 စက်တင်ဘာလ 2018 သို့ 10:52
ဇွန်လ moreira ကပြောပါတယ်:
အလွန်ကောင်းသောသင့်ရဲ့ရှင်းပြချက်! ငါကဒီမှာ ပြု. အရာရာအလုပ်လုပ်ခဲ့. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
11 ဒီဇင်ဘာလ 2018 သို့ 0:45
Mario ချားဗေ့စ် ကပြောပါတယ်:
သငျသညျစပိန် Mem ED အဘို့ပြုအဖြစ်တရုတ်၌ငါ့ကိုပို့ပေးငါသည်ငါ့ဂျီပီအက်စ် tracker set နဲ့ကျွန်မမက္ကဆီကိုနှင့်တည်နေရာအတွက်ရယ်အဖြစ်မင်္ဂလာညဟဲလိုငါကူညီနိုင်
4 ဇန္နဝါရီလ 2019 သို့ 1:23
Antonio Leandro ဓမ္မရာဇဝင် ကပြောပါတယ်:
အဆိုပါမှတ်တိုင်ကို turn off ဖို့ဘယ်လို, ပရီးမီးယားလိဂ်မှကားကိုနောက်ကျော.
? 123456 အလွိုင်းကားတစ်စီး.
29 ဇန္နဝါရီလ 2019 သို့ 22:13
18 ဧပြီလ 2019 သို့ 15:06
Denis Herlan ကပြောပါတယ်:
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း, ငါ REGISTER ရယူဘူး5ORGAGE IN tracker, ဆိုတော့မလုပျသိ TYPE ကိရိယာကိုသုံး, MY tracker နှင့် TK-103 B,, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
26 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019 သို့ 15:53
မင်္ဂလာပါ, သတ္တုတွင်း TK103 သည်နှင့် GPS103-B ကအဖြစ်လိမ္မော်ရောင်ထလက်မှတ်ရေးထိုး, အဆိုပါ Post ကိုတွင်ပါရှိသောအဖြစ်. ဤတွင်အလုပ်လုပ်, မိုဘိုင်း App ကိုမှာသူတို့ကို၏အသုံးပြုမှုအပါအဝင် (အခမဲ့). မိနျ့တျောမူ၏!
5 မတ်လ 2019 သို့ 18:56
ana လူစီယာ ကပြောပါတယ်:
ညဦးယံ၌ကောင်းသော, ရှင်းပြထားသကဲ့သို့ငါအားလုံး configuration ကိုပြု၏…. အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်… ဒါပေမဲ့….
နေ့တိုင်း , အချိန်ကာလမရှိပါ 21:00 သို့ 00:00, အဆိုပါယူနစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အော့ဖ်လိုင်းတတ်၏…. ထိုနောက်မှသာပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည်…. ငါ tracker စနစ်တကျအလုပ်လုပ်သည်ကိုငါသိ၏, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါက SMS ကနေတုန့်ပြန်တာပဲ.
မည်သူမဆိုဤပြproblemနာရှိခဲ့ပါတယ် ? ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာသိတယ် ?
12 မတ်လ 2019 သို့ 20:37
Admilson Nahmias ကပြောပါတယ်:
ငါတူပြဿနာရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဘာမျှမတွေ့ရှိရ, တစ်ဦးနည်းပညာရှင်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်သည်အထိ, ကိုယ့် tracker တွင်အောက်ပါ SMS ကိုပေးပို့:
အချိန် zone123456 0
ကြောင်း၏နံပါတ်ပြန်ခေါ် 1 တစ်ဦး6ဒါဟာက default password ကိုဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျပြောင်းလဲပြီဆိုပါက, သင်၏စကားဝှက်ကိုထည့်ပါ
26 မေ 2019 သို့ 21:26
ငါအသင်းကို tracker အိမ်မှာမှတ်ပုံတင်ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့်သူက PC ကို ၀ င်ခွင့်မပေးဘူး၊ ငါကစာမျက်နှာပိုင်ဆိုင်တယ်၊ အဲ့ဒီထဲကယူနစ်ကိုလိုက်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်
5 ဧပြီလ 2019 သို့ 21:30
အငယ်တန်း wilson ferreira ကပြောပါတယ်:
ဂျီပီအက်စ် 303 GSM GPRS tracker 303g စံသည်အထိနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်ဖြစ်တယ် 21 သန်းခေါင်ငါ၏အ zap back ပြီးနောက်ဒီတော့နာရီရှိ၏ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည် 63 9*******8
18 ဇွန်လ 2019 သို့ 15:55
နံနက်ကောင်းသော….ငါဆာဗာ duda..porque ရွေးကောက်တော်မူသည်ကို 1 en TrackerHome….Selection ကိုဒီဆာဗာတွင်ဖြစ်သင့်ကြောင်း….ကြေးဇူးတငျစကား
4 စက်တင်ဘာလ 2019 သို့ 10:12
မင်္ဂလာပါ, သင်သည်အခြားဆာဗာကိုကြိုးစားနိုင်. ငါ server1 ကပြောပါတယ်, ထိုသို့စမ်းသပ်မှုယူသူကိုဆာဗာကြီးကအလုပ်လုပ်ခဲ့သောကွောငျ့. ပှေ့ဖကျ
8 စက်တင်ဘာလ 2019 သို့ 17:24
အပြာရောင်သမုဒ္ဒရာ၌ငါ့ GPS နံနက်ကောင်းသောပေါ်လာအားလုံး tracker ဖြေရှင်းချက်သိတယ်သူကိုအိမ်မှာကျေးဇူးပြုပြီးတစ်စုံတစ်ဦးမှာအလုပ်မ. အားလုံး sms ကိုကောင်းသောအမှုကိုပြုပေမယ့်ပလက်ဖောင်းအလုပ်မ
9 ဇန္နဝါရီလ 2020 သို့ 9:24
လူးဝစ်တစ်ဦးက. Tinoco ကပြောပါတယ်:
ငါလိုအပ်အကူအညီနဲ့, ငါပယ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဝေးလံခေါင်ဖျားဝေးလံခေါင်သီ restore ချင်, SMS ကိုတဆင့်ထက်အခြား, ဒါကြောင့်ဝဘ်အဘို့ဖြစ်၏.
13 ဇန္နဝါရီလ 2020 သို့ 20:18
Goiania မိတ်ကပ် ကပြောပါတယ်:
28 မတ်လ 2020 သို့ 4:44
rajitha arangala ကပြောပါတယ်:
ငါမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် IMEI နံပါတ်ရိုက်ထည့်တဲ့အခါ (http://www.gpstrackerxy.com/Login.aspx?Server=2) . ၎င်းသည် IMEI အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သော error message ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်. ငါကျော်လုပ်ဖို့ရှိသည်ဤပြproblemနာကိုလာ.
18 စက်တင်ဘာလ 2020 သို့ 22:08
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.470.012 ဝင်ရောက်ခွင့်